China Kavha pateni dhizaini kududzira magadzirirwo akareruka mudzidzi notibhuku Vagadziri uye Fekitori | Yuxingyua
Kavha pateni maitiro ekugadzirisa maitiro ekushandura nyore nyore bhuku remudzidzi
MOQ: Makopi 1000
Chigadzirwa kurongedza: OPP inozvisungirira-bhegi pamwe nekatoni yekupakata
Chitubu bepa mudzidzi kabhuku
Sarudza bepa remabhuku ekunyorera evadzidzi:
Kutanga, kunaka kwepepa. Kazhinji, bepa rinoshandiswa ndeye beige Daolin bepa. Iko kunaka kwemapepa maviri aya ndeemhando yepamusoro pakati pemapepa akafanana epapepa. Rudzi urwu rwepepa rine kutambanuka kudiki, yunifomu inki yekumwa, kutsetseka kwakanaka, compact uye opaque mameseji, yakasimba mvura kuramba, yakasimba mativi-matatu maitiro, uye mhando yakanaka uye yakaderera mutengo!
Yakasarudzika skrini yemudzidzi kabhuku
1. Pepa ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvebhuku rekunyorera. Iwe ungangoda bhuku risingabude ropa nepeni uye rine mhando yakanaka yekunyora. 2. Fomati: Tine akasiyana akasiyana saizi kusangana nezvinodiwa zvakasiyana, zvese izvo zvinogona kusangana. 3. Kugadzikana: Zvigadzirwa zvedu zvinoshandisa yakanyanya-tembiricha yekupisa glue uye yakapetwa simbi bhuremu inlay, iwo mapeji emukati akatsiga kwazvo, uye bepa rine kumwe kushanda kwemvura. 4. Kureruka kwekushandisa: inogona kutenderedzwa yakati sandara, uye mapeji emukati anogona kusunungurwa zvakasununguka. Zvese mune zvese, zvigadzirwa zvedu ndizvo zvaunogona kusarudza
2. Chechipiri, ruvara rwebepa. Wese munhu anoziva kuti beige bepa, yakapfava muvara, ndiyo sarudzo kune vanhu vanoshandisa notepad kunyora mukati memapeji.
Kudzivirirwa kweziso peji remukati mudzidzi kabhuku
Yetatu, kukora kwebepa. Kune makobvu maviri epepa anowanzo shandiswa mumabepa ekunyora: 80 gramu uye 100 magiramu. 80 magiramu epepa akatetepa zvishoma pane magiramu zana epepa, akaenzana pakukora sebepa redu rekunyora. Mhando mbiri dzebepa dzinogona kushandiswa pamapeji emukati. Musiyano uripo pakati pemhando mbiri dzebepa ndewekuti: 80 magiramu epepa akatetepa zvishoma, uye kurohwa kwakapfava, uye manzwiro ekunyora achange akasununguka; nepo iwo magiramu e100 epepa akaomarara uye kunyora Hazvina kufanana nemagiramu makumi masere, rimwe nerimwe rine zvarinobatsira.
PU yeganda mudzidzi kabhuku
Yakakurudzira mapepa mapepa kusarudzwa kwemabhuku ebookbook akagadzirwa
Chechina, kutsetseka kwepepa. Kunatsurika kwekunyora bepa kwakakosha kwazvo, izvo zvakakosha zvakanyanya nekugadzira mapepa (kunamira). Iko pamusoro kwepepa rakanaka kunofanirwa kuve kwakatsetseka uye kwakatsetseka, uye kunyora zvakatsetseka. Pepa remhando yepasi rine astringent kunzwa mukunyora, uye bepa rine ruzha rukuru.
Qing new kabhuku kemudzidzi
Pashure: Yakagadziriswa logo, yakagadziriswa yemukati yemukati propaganda kabhuku
Zvadaro: Tsika dzakanongedzwa tsika yekatuni pateni yemhuka katuni matiketi
Mabhuku eBraille Leather Notebook
Mabhuku eBhuku eBhuku
Kuteedzera Log Pepa Notepad
Nyoro Surface Notepad
logo yakatarwa, yakagadziriswa peji yemukati ...
High-yepamusoro zvakatipoteredza noushamwari PU leathe ...
tsika nedehwe ruvara tsika Specification busin ...
Yakasarudzika yeganda yeganda, yakasarudzika zvishongo ou ...